Интериорен дизайн – идеи за модерна спалня | Art senses – идеи за дома и градината
Интериорен дизайн – идеи за модерна спалня
06.08.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Zvemukati, Imba yekurara
Nemazano ekushongedzwa kwemukati meimba yemazuva ano yekurara inoratidzwa pano, isu tichajekesa zvakati wandei zvakakosha mukugadzirwa kwekamuri, iro kushanda kwayo kuri kutungamira chiratidzo. Iyo mubhedha ndiyo nzvimbo yepasirese repamba kuitira zviroto, zororo uye zororo, uye sarudzo yaro inofanira kunge iri sosi yedzimwe pfungwa. Inofanirwa kuve yakagadzikana uye isangana neyakawanda yekuda kwako zvaunoda sezvinobvira. Chimiro, zvingangoita muchiitiko ichi, zviri nani kuve munzvimbo yechipiri, izvo hazvireve kuti inofanira kusiiwa. Kubva minimalism kusvika kuputika kwakanyanya kwezvemhando uye mavara, inogona kugadzira nzvimbo yekunyaradza yega kuti vashoma vaone.
Kuvhenekera chimwe chinhu chakakosha mukamuri ino uye chinofanira kunyatsofungidzirwa uye kuurayiwa. Zvigadzirwa uye zvigadzirwa, magirazi ari pamusoro, anobatsira niches uye wardrobes, yekurara pasi uye pasi, madziro uye ceiling zvishongedzo uye zvishongo zvinogadzira mikana yakakura yekugadzirwa kwemukati uye dhizaini yako yemazuva ano yekurara.
imba yekurara, yekushongedza yekurara, mazano ekugadzirwa kwemukati, yekurara mazano, imba yekurara yemukati, zvemukati dhizaini, imba yekurara yemazuva ano, imba yekurara, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Kune mafeni emavara akajeka uye zvishongo, tinopa akati wandei mazano ekushongedza kwemukati ...
Iwo mavara paunoshongedza zvemukati
Kana uchishongedza imba yedu, zvakakosha zvikuru kuti tinosarudza sei mavara uye nekubatanidzwa. Ruvara ...
Pfungwa dzinoverengeka uye maitiro ekupeta mapepa
Isu tinokuparidzira iwe zvimwe zvakanaka uye zvepakutanga mazano ekupeta machira ...
Kicheni pane iyo terata
Mumisha yanhasi minimalist, kushandiswa kwakaringana kwenzvimbo kwamutswa ...
Nekuratidzwa kwemazano aripo papeakiti yezuva nezuva, tichaedza kuratidza zvimwe zvakanakira ...
Yemukati dhizaini yekugara yekutandarira ye18 sq.m.
Neiyi 18 Square Meter Yekugara YeMukati Megadziro Yekutumira Post, Tichazivisa Inobatsira ...
Yemukati dhizaini yefurati 159 square
Ichi chirongwa chemukati kugadzirwa kwemusha wakakura, iyo imba inogara nehukuru hwe ...
Yemukati dhizaini - mazano uye matipi eiyo aquarium mumba yekutandarira
Nepfungwa dzazvino uye matipi eimba yekugara aquarium uye kuibatanidza iyo mune iyo yakazara pfungwa ye ...